NY TALENTA IZAY OMENA ANTSIKA…. – filazantsaramada
NY TALENTA IZAY OMENA ANTSIKA….
Publié parfilazantsaramada	 février 13, 2015 février 13, 2015 Laisser un commentaire sur NY TALENTA IZAY OMENA ANTSIKA….
« Fa izay rehetra manana dia omena, ka hanam-be izy; fa izay tsy manana kosa, na dia izay ananany aza dia halaina aminy. » Matio 25:29
Mametraka ny fitokisany amintsika Andriamanitra ka omeny andraikitra isika. Dia, toy ny talenta eto izay omen’ny tompo ny mpanompo. Tsy ny ezaka ataontsika no ahazoantsika ny famonjena fa ny fanekentsika ny hosasàn’ny ràn’ilay Zanakondry teo amin’ny hazo fijaliana; Làlana tokana ahazoantsika ny fanadiovana, famelana ny helo-tsika ary ananganana antsika ho zanak’Andriamanitra. Ny ambaran’izany: Dia tsy afaka mirehareha isika ny amin’ny talenta izay nomena antsika fa aoka Andriamanitra no reharehantsika. Omen’Andriamanitra andraikitra isika hampitombo ny talenta:
* Ny hita eto dia karazany telo ny olona omena talenta, na marimarina kokoa karazany roa.
– Ny nomena talenta dimy sy roa: nampitombo ny talenta nomena azy izy ireo, ka ny dimy lasa folo, ary ny roa lasa efatra ary dia nomeny ny tompony avy ireo. Voalaza fa niaraka tamin’izay raha vao naharay ny talenta izy dia nampitombo izany.Tena feno fahavitrihina sy fahazotoana!
– Ny iray kosa izay nahazo talenta iray dia lasa niady lavaka ka nandevina ny talentany, ary araka ny heviny dia tompo mila voa tsy ary io tompo io ka mijinja eny amin’izay tsy namafazany ary manangona eny amin’izay tsy nanahafany. Raha ny marina dia izy izay nomena indray no manome tsiny ny mpanome.
* Ny valiny avy amin’ilay tompo izay oharina amin’Andriamanitra:
– Faly Andriamanitra amin’ny mpianatra mazoto nanaiky nametrahana andraikitra: tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin’ny kely ianao dia hotendreko ho mpanapaka ny be, midira amin’ny fifalian’ny Tomponao. Hiditra amin’nyfifalian’Andriamanitra isika rehefa matoky.
– Tezitra Andriamanitra amin’ny mpanompo ratsy saina, izay tsy mandray amin’ny fo madio ny fanomezan’Andriamanitra azy ny talenta, ary tanteraka amin’ilay fiteny hoe: mandevin-talenta! Mety misy fiantraikany amin’ny fiainanana mandrakizain’ny olona ihany ny tsy firaharahina ny talenta izay nomen’Andriamanitra azy na dia tsy ny asa aza no mahavonjy! Andeha isika hifona amin’Andriamanitra noho tsy nampiasantsika amin’ny tokony ho izy ny talenta izay nomena antsika, indrindra ny Tenin’Andriamanitra izay nomena antsika ve efa mba nampiasantsika tsara, nozaraintsika tsy antery ka nitondra famonjena ho an’ny hafa?
Ny Tompo anie hampahery anao. Amen!
Publié parfilazantsaramada février 13, 2015 février 13, 2015 Publié dansUncategorized
FJKM Ankadiaivo Miaramino
Lycée Privé Martin Luther Ambohimanambola